ဘတ်ဂျတ်ကြည့်နေစရာမလိုဘဲ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းသွားစားနိုင်မယ့် ကွေ့သယိုဆိုင်လေး….. – FoodiesNavi
ဘတ်ဂျတ်ကြည့်နေစရာမလိုဘဲ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းသွားစားနိုင်မယ့် ကွေ့သယိုဆိုင်လေး…..
By yin sandi On October 3, 2018 0
ရံဖန်ရံခါဆိုရင်တော့ ဈေးမြင့်တဲ့အစားအစာတွေသွားစားဖို့အဆင်ပြေပေမယ့် နေ့တဒူဝစားသောက်ဖို့အတွက်ကျတော့ ဘတ်ဂျတ်ဆိုင်တွေမှ တွက်ချေကိုက်တာရယ် ? ဘတ်ဂျတ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးများတွေ့ထားရင် စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အချိန် ဘတ်ဂျတ်အခြေအနေကြည့်မနေဘဲ ကောက်ခါငင်ခါသွားစားလို့ရနိုင်တော့ မင်မင်ကနေ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘတ်ဂျတ်ဆိုင်တွေအများကြီးထဲကနေ ယိုးဒယားအစားအစာကောင်းကောင်းလေးတွေရနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်နော်။ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း (၁၀၀၀)ကျပ်စွန်းစွန်းလေးတွေမို့ အပီကိုဝိုက်နိုင်မယ့်ဆိုင်လေးပါနော်။
ဆိုင်နာမည်လေးက”ဝါးရိပ်မြုံ” ? ဒီဆိုင်လေးမှာနာမည်ကြီးတာကတော့ ယိုးဒယားကွေ့သယိုပဲ။ ကြက်သား ၊ ဝက်သား ၊ ကြက်ကျောလုံးတွေနဲ့ရနိုင်တယ်။ ကွေ့သယိုအရည်(ရှယ်)ဆို (၁၇၀၀)ကျပ် ၊ ပုံမှန်ဆို(၁၄၀၀)ကျပ် ၊ ကွေ့သယိုအသုပ်(ရှယ်)ဆို (၁၇၀၀)ကျပ် ၊ ပုံမှန်ဆို(၁၅၀၀)ကျပ်ပဲပေးရတော့ တော်တော်လေးတွက်ချေကိုက်တယ်ရယ်။ မင်မင်ကတော့ အသုပ်အရသာလေးကိုပိုကြိုက်တယ်။ ဆိုင်ကြီးတွေမှာ(၃၀၀၀)ကျော်လောက်ပေးစားရတဲ့ အရသာမျိုးအတိုင်းကောင်းကောင်းလေးစားရတယ်။ စိုစိုဖတ်ဖတ်လေးသုပ်ပေးထားပြီး ကွေ့သယိုဖတ်အိအိလေးတွေထဲ ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာတွေပျော်ဝင်နေတော့ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တကယ့်ကိုတန်တဲ့အရသာမျိုးပါပဲ။ ဘေဘီလေးတွေပါလာလို့ ပွဲတဝက်ပဲမှာချင်ရင်လည်း (၇၀၀)ကျပ်နဲ့ကွေ့သယိုပွဲတဝက်လေးမှာလို့ရသေးတယ်နော်။ တစ်ခါတရံတော့ လက်သိပ်မမှန်တာပဲပြောရမယ်။ ပဲငံပြာရည်အရသာကဲနေတာမျိုးခံစားရတတ်တယ်။ တော်တော်များများတော့အဆင်ပြေတယ်။
ယိုးဒယားအစားအစာမှာ မပါမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အထောင်းလေးတွေကလည်းရှယ်ဂေါ်ချက်ပဲ။ အထောင်းလေးတွေတိုင်းက အရသာအရည်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ အရည်လေးတရွှတ်ရွှတ်ခပ်သောက်ရင်း အထောင်းအရသာလေးတွေတမြေ့မြေ့ခံစားရတာကလည်း တကယ့်ကိုဖီးလ်တစ်မျိုးပဲ။ သင်္ဘောသီးထောင်း ၊ သခွားသီးထောင်း ၊ ပြောင်းဖူးထောင်း ၊ မုန်လာဥနီထောင်း ၊ မုန့်ဖတ်ထောင်းတွေရနိုင်တယ်။ ဈေးနှုန်းတွေက (၁၀၀၀)ကျပ်ကနေ (၁၃၀၀)ကျပ်ထိပဲ။ ဒီဆိုင်လေးကမီနူးတွေထဲ ဈေးကြီးတဲ့မီနူးဆိုလို့ ပင်လယ်စာထောင်းဗန်းကြီး(၅၀၀၀)ကျပ်နဲ့ ဆားဘဲဥပုဇွန်ထောင်း(၃၅၀၀)ကျပ် တွေပါ။ ဒီမီနူးတွေကလည်း ဈေးနှုန်းနဲ့လိုက်အောင် များများလေးနဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးဆိုတော့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ရှဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ အိုကေပါတယ်နော်။ ဆိုင်နေရာလေးကတော့ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားအနီး ၊ ဓမ္မာရုံနားမှာပါနော်။ တကယ့်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ အရသာကောင်းကောင်းတွေစားသုံးနိုင်ဖို့ တကယ့်နေရာကောင်းလေးပါနော်။
In Restaurant Guides Tagged kwae tha yo, Thai Foods Leaveacomment
ဘာစားစား(၁၀၀၀)ကျပ်ပဲပေးရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက အသုပ်စုံ